Gara uine tariro uye ramba uchitenda. zvinhu zviri nani zviri mberi. - Anonymous - Quotes Pedia
Ramba uine tariro uye ramba uchitenda. Zvinhu zviri nani zviri pamberi. - Asingazivikanwe
Kufambira mberi mukutarisana nenhamo zvinogona kunetsa asi vanhu vanogona kukunda kutya kwavo uye mberi ndivo buda zvinobudirira. Iwe unofanirwa kuve nepfungwa dzakajeka kana paine nyonganiso.
Iwe unofanirwa kuzvimiririra iwe nevamwe vazhinji vanoda rubatsiro rwako futi. Hupenyu huchakanda matambudziko kwauri. Izvo hazvidzivirike asi kugona kugadzira mandimu kana hupenyu hukakupa mandimu ndiko kunokubatsira kubuda mumatambudziko. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nesimba rakanaka uye tariro kuti chimwe chinhu chakanaka chichaitika.
Unofanira kutenda pachako uye kunzwisisa kuti uchawana simba muhondo zvinobuda mberi. Iwe uchave murwi uye unokurudzira vamwe zvakare. Pamwe chete, tariro ichatibatsira kufambira mberi senharaunda.
Kunyangwe muhupenyu hwako, chero nedutu rinouya nenzira yako, ziva kuti 'izvi zvakare zvichapfuura'. Iwe unongofanirwa kuchengetedza kutsunga uye kuzvidzikisira uye tarisira mberi. Nguva dzose funga kuti chimwe chinhu chakanaka chiri pamberi uye tora tariro kubva kune iyo chaiyo kufunga.
Zvikomberedze nevanhu vakanaka uye nevaya vanogona kuve nemusana wako kana kuenda kuchinge kwakaoma. Verenga mabhuku kubva kune vanyori vari pragmatic uye vanokubatsira iwe kurarama nemifungo yako. Izvi zvichaita kutsivira simba rako uye akubatsire kutarira mberi muupenyu.
Kuramba netariro anokupai tariro uye anokupa simba rokumutsa pokugumira. Iyo inoderedza kutya kwako uye inokuita kuti uedze mikana inogona kukubvisa mumamiriro ezvinhu. Izvi ndizvo zvinotungamira kumhinduro uye isu tinokunda Kukunda zvinetso, kufambira mberi muhupenyu.
Kutenda Mauri Ma Quotes
Kutenda Quotes Uye Kutaura
Zvirinani Mangwana Quotes
Kuwana Mberi Quotes
Chengeta Kutenda Quotes
Tarisa Mberi Quotes
Yakanaka Kufunga Quotes
Gara Wakakodzera Quotes
Usambozvirasa iwe paunenge uchiedza kubatirira kune mumwe munhu asina hanya nekurasikirwa newe. - Asingazivikanwe
Nguva zhinji, tinoedza kubatirira pane akati wandei mamiriro kunyangwe tikaziva kuti mumwe munhu…
Kana iwe usingafunge kuti une chero maropafadzo, rangarira moyo wako uchiri kurova. - Asingazivikanwe
Kana iwe usingafunge kuti une chero maropafadzo, rangarira moyo wako uchiri kurova. - Asingazivikanwe Akabatana Akabatana:
Amai vanogona kunge vakadzidza kana vasina kudzidza, asi ivo ndivo "gwara rakanakisa" uye "tariro yekupedzisira" munyika kana iwe ukakundikana muhupenyu hwako. - Asingazivikanwe
Amai vanogona kunge vakadzidza kana vasina kudzidza, asi ivo ndivo "gwara rakanakisa" uye "tariro yekupedzisira" mu…
Ramba wakasimba uye uite kuti vashamisika kuti iwe uchiri kunyemwerera sei. - Asingazivikanwe
Kana iwe uchinyemwerera, iwe unogara uine tariro kubva mukati uye nekuparadzira iyo vibe pakati pevanhu…
Famba zvinyoro nyoro muhupenyu hwevamwe. Haasi maronda ese anoonekwa. - Asingazivikanwe
Tinogona kuona munhu achifara uye achinyemwerera nguva dzese, asi hazvireve kuti iye kana…